कहिले हुन्छ मन्त्रीपरिषद् विस्तार, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? — Imandarmedia.com
कहिले हुन्छ मन्त्रीपरिषद् विस्तार, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिएपछि सरकार विस्तारको बाटो खुलेको छ । एमालेबाट अलग भएका माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीबाट अलग भएका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
यी दुईसहित दलको संख्या ९७ पुगेको छ । एकीकृत समाजवादी चौथो र लोकतान्त्रिक छैटौं पार्टी बनेका छन् । आयोगले नेपाल र ठाकुरको पार्टीलाई मान्यता दिएसँगै सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले ९८ सांसदमा खुम्चिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३ र जसपाका १९ सहित १५२ सांसद पुगेका छन् । एकीकृत समाजवादीले तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने जनाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दोस्रो संशोधन अध्यादेशअनुसार दुवै पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्णय भएको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । आयोगले नेपालको पार्टीको दर्ता नम्बर १६६ र ठाकुरको पार्टीको दर्ता नम्बर १६७ कायम गरिदिएको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएमा दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिएपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
२ सय ३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५५ जना एमाले छाडेर नयाँ दलमा समावेश भएका छन् । एमालेबाट छुट्टिएका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको आधारमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले सांसद भने २० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेन ।
आयोगले दुवै पार्टीलाई बुधबार साँझ दल दर्ताको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ । आयोगले दल दर्ताको निवेदन दिएका दुवै पार्टीका संघीय सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई बुधबार बिहान ११ बजे सनाखतका लागि बोलाएको थियो । आयोगका अनुसार एकीकृत समाजवादीका ३० सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यको सनाखत भएको थियो ।
३० मध्ये २३ जना प्रतिनिधिसभा र ७ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । यही पार्टीमा आउन चाहेका तीन जनाको भने आयोगले सनाखत गरेन । झलनाथ खनालबाहेक अरू सबै आयोगमा उपस्थित भएर सनाखत गरेका हुन् । खनालको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सनाखत गराएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सांसद र १६ केन्द्रीय सदस्य सनाखत भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यमा रेशम चौधरीको पनि हस्ताक्षर थियो तर उपस्थित नभएकै कारण सनाखत हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
एकीकृत समाजवादीमा जान चाहने तीन सांसदलाई आयोगले सनाखत नगराएपछि उनीहरू एमालेकै सांसदको हैसियतमा छन् । प्रतिनिधिसभाका सोमप्रसाद पाण्डे, माया न्यौपाने र राष्ट्रिय सभाकी शारदादेवी भट्टको सनाखत हुन नसकेको हो । दल दर्ताका लागि आयोगमा सुरुमै निवेदन दिँदा उनीहरूको नाम नभएका कारण सनाखत नभएको आयोगले जनाएको छ ।
दल दर्ता भएसँग अब सरकारलाई मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ । नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद विस्तार रोकेका थिए ।
अब दुई पार्टीले घुट्टै दलको मान्यता पाएकाले उनीहरु सरकारमा सहभागी हुने छन् । नेपाल समूहलाई एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री बनाउने विषयमा सहमती भइसकेको छ । आज दिनभर मन्त्री बन्ने नेताहरुका विषयमा छलफल हुनेछ ।
भोली शुक्रबार बेला मन्त्री परिषद विस्तार हुने बालुवाटार श्रोतको भनाई छ । अब काँग्रेसबाट ४ जना, माओवादीबाट ४ जना, एकीकृत समाजवादीवाट ६ जना र जनता समाजवादीबाट ६ जना मन्त्रीहरुले सपथ खानेछन् ।
महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा जाने इच्छा देखाएको खण्डमा केही मन्त्रालय घटबड हुनेछन् । काँग्रेसबा मन्त्री बन्नेहरुको लिष्ट तयार हुन सकेको छैन् । माओवादी र एस पार्टीले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरुको लिष्ट तयार पारिसकेको छ ।
माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेलले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । उनीसहित पूर्वबाट सुदन किराती, मद्येसबाट शिवकुमार मंडल, दलितबाट महेश्वर गहतराज (अथक) मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
नेकपा एस बेदुराम भुसालकको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ । प्रेम आले, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, मेटमणि चौधरी र हिराचन्द्र केसीमध्ये १ जना नियुक्त हुने जनाइएको छ ।
पार्टी फुटेपछि बाबुरामले खोले रहस्य
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टी फुटेपछि रहस्य खोलेका छन् । उनले सरकारमा सहभागीका बारेमा रहस्य खोलेका हुन् । उनले तराई–मधेश र पहाडको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी आधारमा आफ्नो पार्टी एक साताभित्र सरकारमा सहभागी हुने दावी गरेका छन् ।
पार्टी सुदृढीकरण एवं जनजागरण अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेशलाई समेटेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी नयाँ विचार र एजेन्डासहितको वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदयमान भएको दावी गरे ।
महन्थ ठाकुरले प्रतिगमनको मतियार बन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएको टिप्पणी गर्दै डा। भट्टराईले ठाकुर–महतोलाई खाने बेलामा अभागीलाई रिस उठे जस्तै भएको व्यंग्य गरे।
जसपा बाहेक कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले मुलुकलाई सही निकास दिन नसक्ने दाबी गर्दै उनले आगामी निर्वाचनबाट जनताका उत्साहजनक मत पाएर जसपा बलियो शक्तिको रुपमा उभिने विश्वास व्यक्त गरे।
भाद्र १ र २ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार सात वटै प्रदेशमा सुरु भएको पार्टी सुदृढीकरण र जनजागरण अभियानले जसपालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने उनले दावी गरे।
बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूबाट नेतृत्वदायी अगुवा नेताहरु सम्मिलित सो कार्यक्रमलाई जसपाका नेताहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र हिसिला यमी लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।